Zandarimariam-pirenena: 50 taona lasa izay no nandraisan'ny Malagasy voalohany ny fibaikoana
vendredi, 29 mars 2019 17:25
Hankalaza ny andron'ny Zandarimariam-pirenena ireo miaramila eo anivon'izany vondron-kery lehibe izany ny 02 aprily 2019 izao, ka ao amin'ny Tranombokim-pirenena Ampefiloha no hanatontosana izany.
"Zandarimaria madio, matihanina, mahavita ny andraikiny, afaka miaro ny andrim-panjakana, ny olona ary ny fananana", no lohahevitry ny fankalazana amin’ity.
Hisy tranoheva ao amin'ny "efitrano DOX" izay hampiratiana ny mikasika ny tantaran'ny Zandarimariam-pirenena sy ireo asa aman'andraikiny ankehitriny, izay hitohy hatramin'ny faha 04 aprily. Hisy koa ny dinika arahana adihevitra izay hiresahana mikasika ny lohahevitry ny fankalazana.
Hitafa mivantana ao amin'ny Radio Nasionaly Malagasy ireo tompon'andraikitra ambony mifehy ny Zandarimariam-pirenena ny tolakandro. Hiresaka momba ny fandriam-pahalemana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fandraisana andraikitra manoloana ireo fitarainana alefan'ny olona mikasika Zandary mibirioka amin'ny asany, ny fandraisana Zandary vaovao izy ireo.
Ny 02 aprily 1969, 50 taona lasa izay no nandraisan'ny Malagasy voalohany ny fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena, tamin'ny namindran'ny filohan'ny Repoblika Philibert Tsiranana ny faneva, avy amin'ny frantsay ho an'ny Lietna-kolonely Richard Ratsimandrava. Izany no antony nisafidiana'ny Zandarimariam-pirenena an'io andro io ho ankalazaina isan-taona nanomboka ny taona 2013, satria tsy tantaran'ny Zandarimariam-pirenena fotsiny no fonosin'izany fa tantaram-pirenena ihany koa.